Umkhiqizi Wethayela Lobumba
Home Information Other PagesUmkhiqizi Wethayela Lobumba
Ihlanganiswe ngo-2015, i-bluezone vitrified pvt. Ltd okuyinkampani ehamba phambili yokukhiqiza amathayili e-porcelain e-india. Khuphukela phezulu embonini yamathayili e-india kukhokhwa kuphela isicelo se-centric yamakhasimende kanye nesifiso sokuguqula imboni yamathayili ngokuphelele. Isigamu seminyaka eyishumi nokuthuthuka okuningi kwezobuchwepheshe kamuva, ngoba i-bluezone vitrified inselele okuwukuphela kwayo eyayisele kwakuwukuhlola ukuba khona komhlaba wonke; ngokuthunyelwa kwamanye amazwe emazweni angaphezu kwe-10 + kuwo wonke amazwekazi ama-3 ithole ngokuncomekayo leyo nhloso futhi isalangazelela okunye. Iqinisekisiwe ngamazinga ekhwalithi kazwelonke nakwamanye amazwe, izindlela zokuqapha zokwakha amathayili ethu ngokuya ngamathrendi wakamuva, i-bluezone vitrified ithembise ukusabalala kuwo wonke amagumbi omhlaba.
Wonke amazwe nobumbano lwawo lokuzijabulisa njalo nokuzikhethela okuhle; ubudlelwano bethu ne-emirate bekuyindaba yesikhathi kuphela. Futhi umdlalo uqinisekisiwe ngokuthumela kwethu empumalanga emaphakathi. Amaphayona okuthunyelwa kwamanye amazwe kwamathayili obumba nodonga emhlabeni, esinakho egameni lethu ukuthekelisa okungenakubalwa okuphumelelayo nokuphumelelayo esifundeni.
Ungawasebenzisa kuphi amathayili we-porcelain?
Sezadlula izinsuku lapho amathayili ayenzelwe ngamakhishi akho noma izindlu zangasese zakho kuphela, izixazululo zethayela yobudala obusha zinikela ngezixazululo eziningi zokuthayela ezifanele ingxenye ngayinye yanoma isiphi isikhala sokwakhiwa kwakho kungaba ikhaya lakho noma ezentengiselwano.
- amathayela we-porcelain amakamelo okulala - indawo yakho yangasese ifanele ingcosana yakho, futhi siyiletha ngeqoqo lethu lamathayili okulala
- amathayela we-porcelain amakamelo okuhlala - okulingana nesitayela, isimo nokunethezeka kuqoqo lethu lamathayili egumbi lokuphumula
- amathayela we-porcelain emakhishini - amathayili akho ekhishi wesimanjemanje futhi anenkinga elandelayo enza isipiliyoni esibophezelayo
- amathayela we-porcelain wezindlu zangasese - khuthazwa yiqoqo lethu lesitayela lokugezela elingaphelelwa yisikhathi ukukuyisa kule minyaka eyishumi entsha
- amathayili we-porcelain wezentengiso - kuwena ophokophelelayo futhi oqinile ngenhloso yokuhweba sinikeza isixazululo samathayili aphelele, angagcini nje ngesitayela kepha egqoke kanzima futhi
Ngokusebenzisa kwayo okuhlukahlukene, amathayili, njengoba sazi, aguqukile - amathayili ethu manje eza ngemiklamo ehlukahlukene, ubuciko kanye nokwakheka okufana nokubenyezela, i-rustic, ushukela, ukhuni lwe-satin nokukhanya okuphezulu. Leli tile manje liphrintiwe ngobuchwepheshe bokuphrinta bedijithali. Konke lokhu kungenzeka futhi kubize kahle ngenxa yamapulatifomu wokuphrinta edijithali avumela izinto ezahlukahlukene ukuthi zivivinywe futhi zizuzwe ngamathayili odonga naphansi.
Amathayili Wenziwe Ngobumba
Ukulinganiselwa kwezixazululo zemabula namatshe kwaholela ekutholeni ithayela eline-vitrified. Lolu uhlobo lwethayela le-porcelain eliphansi ngokumangalisayo elize njengenye indlela eyamukelekile. Inhloso emelana nomswakama yale tile eyenziwe ngobumba iholela kuyo iphindaphindwe futhi ikhuthaze ukusetshenziswa kwangaphandle, futhi ekugcineni ihlolisise amathuba okuklama la mathayili futhi yangena emakhaya akho nakuyo yonke indawo.
Imikhiqizo yethu yamathayili wokuthekelisa
Amatail we-porcelain acwebezelisiwe angama-tile anezikhala ezicwebezelisiwe ezenziwe ngokufaka i-glaze enamathela ngaphezulu kwamathayela we-porcelain. Le ndawo ecwebezelayo yenza kube lula ukuphrinta ngokwamanani amaphethini ahlukile kuyo. Ngakho-ke, ukulingisa zonke izinhlobo zokubukeka ngobuningi bezitayela nokuklama okufana namatshe, izitini, ukhuni noma izingqimba zomhlaba wonke. Umklamo wamathayili we-porcelain acwebezelisiwe afaka phansi wandisa ukubukeka okuphelele kwamakamelo akho ngenkathi unikeza izinzuzo eziningi ezifana
- tile ezenziwe ngobumba ezicwebezelisiwe zikulungele ngokuphelele ukusetshenziswa ngokushisa kwangaphansi,
- Izinketho ezinhle kakhulu zokusebenzisa okumatasa kwezohwebo
- ukukhetha okungcono kakhulu ngaphandle ngenxa yezimpawu zamanzi nesithwathwa
- ihlala isikhathi eside kakhulu
- ubukhulu obukhulu nobuningi benza ukusetshenziswa okuqinile ezindaweni eziphakeme zezinyawo
Tiles ezicwebezelisiwe zobumba
Ngenhloso ebonakalayo nezicelo ezifanele cishe noma isiphi isikhala, amathayili e-porcelain acwebezelisiwe ancanyelwa ngaphezu kwezinye izinketho ezitholakalayo emakethe. Amathayili we-porcelain acwebezelisiwe abalulekile ukuguquguquka kwamathayili we-porcelain acwebezelayo lapho umphumela wokugcina uyitayela elilodwa eligqinsiwe kakhulu, lenziwa ngokusebenzisa ungqimba lomklamo wedijithali ophrintiwe kumatayela we-porcelain. Ziza ngezitayela eziningi ezahlukahlukene, imibala nemidwebo. Isikhalazo esimangazayo saleli tile senza kube inketho ephelele kunoma iyiphi noma yonke injongo yokuthayela. Izinzuzo zayo zifana nethayela le-porcelain elicwebezelisiwe kepha futhi zifaka
- ukumelana namabala nokuklwebheka
- Indawo ecwebezelayo ecwebezelayo inikeza isikhalazo sekilasi lokuqala
Ukusetshenziswa okuningiliziwe kanye nezinketho zokuklanywa ezingenakulinganiswa zamathayili we-porcelain acwebezelisiwe namathayili we-porcelain acwebezelisiwe kubenza babe ukhetho oluthandwa kakhulu phakathi kwabahlobisi bangaphakathi nesitayela nabashisekeli bokunethezeka. Ubuchwepheshe bokuphrinta obenziwe ngedijithali buqinisekisile ukuthi akukho mklamo ongenakwenzeka ukudala kulawo tile. Ziyajabulisa futhi zihlala isikhathi eside futhi ukucwebezela nokucwebezela kwamathayili kugcinwa ngaphezu kwempilo yama-floorings.
Thumela imininingwane yokupakisha
Imikhiqizo ihanjiswa ngosayizi ababili be-600 x 600 mm kanye nama-600 x 1200 mm tile yamapulangwe.